Maxkamadda ciidamada oo sii deysay Taliyihii hore ciidanka DANAB - Home somali news leader
Home NEWS Maxkamadda ciidamada oo sii deysay Taliyihii hore ciidanka DANAB
Maxkamadda ciidamada oo sii deysay Taliyihii hore ciidanka DANAB
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta sii deysay Taliyihii hore ee ciidanka DANAB ee sida gaarka ah u tababaran, kaasoo horay Taliska Ciidanka xoogga dalka ugu soo eedeeyay wax is daba marin iyo isticmaalka awood dheeri ah oo aan lala ogeyn.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jen. Odawaa Yuusuf Raage ayaa shaqo joojin ku sameeyay bishii September Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik, waxaana tallaabadaas si aad uga carooday Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho
Sarkaalkan oo markii shaqo joojinta lagu sameeyay la geliyay xabsi guri, ayaa waxaa markii dambe kiiskiisa lagu wareejiyay Xeer Ilaalinta Maxkamadda Ciidamada qalabka sida, waxaana Maxkamad la soo taagay labo jeer.
25-kii bishii November ayaa la dhageystay eedeyama ka dhanka ah Gaashaanle Ismaaciil Cabdi Maalik, waxaana markhaatiyaal Maxkamadda ka hadlay ay qireen in Ismaaciil Cabdi Maalik uu yahay sarkaal asluub wanaag leh
Si kastaba ha ahaatee xariga iyo xil ka qaadista Jen. Ismaaciil Cabdi Maalik ayaa waxaa ka dhashay cambaareyn iyo in loo arkay arrin siyaasadeed, waxaana odayaal dhaqameedyo ka hadlay xarigiisa ku tilmaameen inay tahay mid ku tagri fal awoodeed oo beel gaar ah lagula dagaalamayo.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay weerarkii lagu laayay Saraakiishii ciidanka ee Galgaduud
Next article“One Nation, Two States” appears as Erdogan visits Azerbaijan for the Karabakh Victory Parade